४ बर्षकी अबोध बालिका माथी बला त्कार,नायिका स्वेता खड्का यसरि पोखिन दुखेसो(भिडियो) – Bannigadhi Today
४ बर्षकी अबोध बालिका माथी बला त्कार,नायिका स्वेता खड्का यसरि पोखिन दुखेसो(भिडियो)
धनराज साउँद २०७७ असार १९, शुक्रबार ०६:४६
नायिका स्वेता खड्का लेख्नु हुन्छ : बला त्कारी र भ्रस्टाचारीलाई फाँसी दिईयोस् .सुर्खेतकि ४ वर्षिया बालिका बलात कृत भएको यो समाचार सुनेर म नि:शब्द भएकी छु ।
२४ वर्षिया युवकले एउटी अबोध बालिका माथि गरेको यो कु-कृ त्यले मेरो मनमा एक प्रकारको आक्रो श, घृ णा र क्रोध उत्पन्न गराएको छ । त्यो पापिको गालामा एक चड्कन हानेर क्रो धको यो ज्वालालाई कम गर्ने इक्षा जागेको छ । अहिले हाम्रो समाजमा बला त्कारका थुप्रै घट नाहरु देखा पर्न थालेका छन् । ७० वर्षिया बृ द्दा देखी ३ वर्षिया बालि कासम्म बलात्का रको शिकार भएको घटनाहरु पढ्दा र सुन्दा अचम्म लागेर आउँछ । दिनानुदिन सिक्षितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यस्ता घिनलाग्दा घटनाहरु पनि बढीरहेका छन् । हाम्रो शिक्षा र सं स्कारले के सिकाउँदै छ ?
बला त्कार र भ्रस्टा चारको अप राध एउटै हुन् । बला त्कारीले नारिको अस्मि तालाई लुटि रहेको हुन्छ भने भ्रस्टाचारीले पुरै देशको अस्मितामाथी खेलिरहेको हुन्छ । जबसम्म भ्रस्टाचारी र बला त्कारीलाई फाँ सीको सँ जाए हुन्न तबसम्म यि दुबै अ पराध रोक्किने छैनन् । अत: यो संबिधानको धारामा भ्रस्टाचारी र बला त्कारीलाई फाँ सी दिने कानुन थप्नको लागि म नेपाल सरकार समक्ष ब्यक्तिगत रुपमा आग्रह गर्दछु । नत्र २४ बर्षिया यि बला त्कारीले २० बर्षको सँजाय मात्र पाउने हो भने उस्ले आफ्नो कैद ४४ बर्षको उमेरमा काटी सक्नेछ र उ रिहा भएर फर्कँदा ४ वर्षिया यी बालिका २४ बर्षको हुनेछिन । अब भन्नुस्, बला त्कारको सँजाय काटे र रिहा भएको त्यो अर्धबैंशे बला त्कारी र २४ वर्षिया ती बला त्‍कृत युवतीले एउटै समाजमा कुन रुपमा जीवन बिताउने ? के यस्तो सँजाय ले अहिलेकी बला त्‍कृत बालिकालाई साँच्चिकैको न्याय मिल्ला ?? अ पराध सुहाँदो सँजायको ब्यवस्था गर्न सरकार किन चुकेको ??? यस् प्रती हामी सबैले ध्यान पुर्‍याउने बेला आईसकेकोछ ।
अन्तमा, म सुर्खेतकी ति अवोध बालिका प्रती साहनुभुती बाहेक के नै ब्यक्त गर्न सक्छु र ! यी अबोध बालिकालाई न्याय दिलाउनको निमित्त यौ नपिपासु त्यो बला त्कारी युवालाई फाँ सीको सँ जाय दिएर एउटा नजिर कोर्न सके अन्य बलात्कारीहरुको मनमा डर पैदा हुने थियो र यि अबोध बालिकालाई साँच्चिकै न्याय मिल्ने थियो ।